सारीमा जिम्न्यास्टिक गरेको भिडियो भाइरल, को हुन् उनी? (भिडियो) – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/सारीमा जिम्न्यास्टिक गरेको भिडियो भाइरल, को हुन् उनी? (भिडियो)
भारतमा सारीमा जिम्न्यास्टिक गरेको भिडियोहरु यतिबेला भाइरल बनिरहेका छन्। भिडियोमा एक युवतीले सारीमै ब्याकफ्लिप, फ्रन्टफ्लिप गरेको देख्न सकिन्छ।
वास्तवमै सारीमा हिँड्दा अथवा कुद्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर भिडियोमा देखिएकी महिलाले जिम्न्यास्टिक कला नै प्रस्तुत गरेपछि उनको यतिबेला चर्चा चलेको छ।
व्यवसायमा संकटको चित्र : बसमा घिरौंला फल्ने भो !
स्मि’ता हि’जै छो’री बो’केर भा’रत गईन् । शि’शिर भण्डा’रीले सन्तोष देउजालाई फो’न ग’र्दा स’बै भि’त्री कु’रा खु’ल्यो (भिडियो हेर्नुस)